Fitaovana maoderina vita amin'ny plywood
Mpanamboatra plywood avo lenta izahay any Shina.Ary tamin'ny 2014, ny orinasa dia nahatratra ny fifanarahana fiaraha-miasa amin'ny famindrana teknolojia miaraka amin'ny ICC any Italia, mba hanomezana fanohanana ara-teknika ho an'ny fampandrosoana ny orinasa.
Izany no mahatonga ny kalitaon'ny plywood ataontsika mahafeno ny fepetra rehetra.
Manasa amim-pahatsorana ny mpanjifa amin'ny orinasanay izahay hitsidika ny tari-dalanay, ary misaotra ny mpanjifa rehetra noho ny fankatoavanay ny plywood.
Mikatsaka ny fampiasana maharitra ny loharanon-kazo amin'ny alàlan'ny kalitao aloha izahay, manangana anarana tsara sy madio foana izahay CHANGYU-HW PLYWOOD, izay miantoka ny fitsipiky ny fandraharahana marina sy avo lenta amin'ny mpanjifanay rehetra.
Manana laboratoara hazo matihanina izahay, izay afaka manao fitiliana manam-pahefana amin'ny karazana plywood rehetra.Ny zavatra andrana dia misy: Famoahana Formaldehyde, Herin'ny adhesive, Modulus elastika, Hery miondrika Static, Herin'ny Hetezana mitsivalana, Hery fitazonana visy sy ny sisa.